War Deg Deg Ah Dibad Bax aad u balaaran oo goordhaw ka bilowday qeybo kamid ah Magaalada Muqdisho | Salaan Media
Home Wararka War Deg Deg Ah Dibad Bax aad u balaaran oo goordhaw ka...
War Deg Deg Ah Dibad Bax aad u balaaran oo goordhaw ka bilowday qeybo kamid ah Magaalada Muqdisho
Waxaa Goordhaw Dibad bax aad u balaadhan uu ka bilowday qeybo kamid ah Magaalada Muqdisho dibad baxaa oo looga soo horjeedo Qaraxyada iyo Weerarada lala eeganayo Walaalaha Turkiga ee kusugan Magaalada Muqdisho.
Dadweyne fara badan oo ka kala imaanaaya Degmooyinka Gobolka Banaadir ayaa hada kusoo aruuraya Isgooska Sayidka ee Magaaalada Muqdisho halkaa oo la filayo in uu ka dhaco Dibad baxa xoogiisa.
Dibad baxayaasha oo u badan Haween iyo caruur ayaa wata boorar ay kaga soo horjeedaan Qaraxyada Magaalada Muqdisho loogu geesanayo Shaqaalaha Turkiga ee Magaalada u yimid in ay gar gaaraan Shacabka Soomaaliyeed.
Masuuliyiin katirsan Dowlada Soomaaliya ayaa la filayaa in ay dibad baxa ka qeyb galaan halkaasna ka jeediyaan khudbado ay ku muujinayaan dareenkooda ku aadan sida ay uga xun yihiin in la weeraro Shaqaalaha Turkiga ee Muqdisho jooga.
Dhawaan ayey aheed markii Kooxda Al-Shabaab Weerar Ismiidaamin ah ku qaadeen Xarunta ay Magaalada Muqdisho ka dagnaayeen shaqaalaha Turkiga kaa oo inta la ogyahay uu ku dhintay Hal Askari oo Turki ah iyo tiro kale oo Turkiyiin oo ah ku dhaawacmeen Weerarkaasi.